यस कारण हुन्छ युरिक ए’सिड, यस्ता छन् बच्ने उपाय – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. यस कारण हुन्छ युरिक ए’सिड, यस्ता छन् बच्ने उपाय – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
यस कारण हुन्छ युरिक ए’सिड, यस्ता छन् बच्ने उपाय
पछिलो समय युरिक ए’सिडका बिरामी बढ्न थालेका छन् । मानिसलाई युरिक एसिड चाहिने भन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा स’मस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ । युरिक ए’सिडलाई एक प्रकारको बाथरोगका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । युरिक ए’सिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो ।
यसले शरीरमा ‘एन्टी अक्सिडेन्ट’को काम गर्छ । यसले जोर्नीहरुमा अत्याधिक दुखाइ गराउँछ । रगतमा युरिक ए’सिड बन्ने र युरिक एसिड पिसाबबाट बाहिर निस्किने प्रक्रियामा गडबडी भयो भने रगतमा पर्याप्त मात्रामा युरिक ए’सिड घुल्न पाउँदैन र विस्तारै गाउटको रुप लिन्छ । एउटा स्वस्थ मानिसमा युरिक एसिडको मात्रा ६ दशमलब ८ एमजी रडिएल हुनुपर्छ।
युरिक ए’सिड बढी देखिए पनि जोर्नीको दुखाइ नहुन सक्छ । यस्ता व्यक्तिलाई गाउट नभएर ‘हाइपरयुरेसिमिया’ भएको हुन सक्छ । त्यसले जोर्नीमा अ’सर गर्दैन ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको March 7, 2021 March 7, 2021 385 Viewed